Iintlobo zemithi yasezidolophini kunye nokukwazi kwazo ukufunxa i-CO2 | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Las Ukukhutshwa kwekhabhoni dayoksayidi Ziyinkxalabo yezixeko kwaye iindlela zifunwa ukunciphisa okanye ukufunxa oku kungcolisa.
La UJunta de Andalucía kunye neDyunivesithi yaseSeville bayasebenza kwiprojekthi ebizwa "Amahlathi ngezixeko". Oko kubandakanya ukuthatha indawo yoluntu esixekweni kunye nokutyala inani elibalulekileyo lemithi kunye nezityalo ukwenza ubunzima behlathi lasezidolophini kunye Iintlobo zendalo itsala ikharbon diokside.
Kuphandiwe ukuba zeziphi iintlobo ezinamandla amakhulu ukufunxa CO2 Kwaye kwagqitywa kwelokuba imithi enjengelemon, iorenji ekrakra, inyongo kunye ne-laurel yilezo zinokuhluthwa okuphezulu kwe-CO2.
Ukusetyenziswa kwezi ntlobo kwiindawo ezisezidolophini akuyi kuphucula kuphela umgangatho womoya kuba icoca amasuntswana kunye nezinto ezingcolisayo, kodwa baya kuphumeza ubuhle kunye nokuphuculwa komhlaba kwezixeko, baya kuba nakho ukufunxa amanzi amaninzi ke oko kuyanceda ukuthintela izikhukula, ukulawula ubushushu bendalo, ukunciphisa ingxolo, phakathi kwezinye izibonelelo.
Kuqikelelwa ukuba yimithi engama-2000 enomthamo omkhulu wokufunxa i-CO2 inokuqokelela iitoni ezili-160 zecarbon dioxide ngonyaka, nesisixeko esikhulu. Ukuba oku kongezwe ukuncitshiswa kongcoliseko kwizithuthi nakumashishini, luphuculo olubonakalayo ngileyo.
Los I-CO2 yendalo iyazika Ziyimfuneko kakhulu kodwa akwanele ukuba ukukhutshwa akuphungulwanga kwaye ezinye iintshukumo ziyenziwa.
Oomasipala abaliqela eAndalusia baphumeza amahlathi ngeeprojekthi zedolophu ukuphucula umgangatho wobomi babemi bayo kunye nokusebenzisana kumlo wokulwa kutshintsha kwe mozulu.
Ezi ntlobo zezenzo ziluncedo kwaye ngokubanzi zivumela ukuba ziphindaphindwe kwabanye, ke yindlela yokukhuthaza amanyathelo ekhonkrithi ukunciphisa ukukhutshwa kwe-CO2 kwalapha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Faka co2 » Iintlobo zemithi yasezidolophini kunye nokukwazi kwazo ukufunxa i-CO2
patricia padilla sitsho
Yonke into engqongileyo, indalo, ukuthintela intlekele, i-agriltura kum inomdla, abantu abaze bagqibe ukufunda. Inqaku elihle.
Phendula kwi-pataricia padilla
Iinkampani eziHlaziyiweyo zaMandla zaseSpain, icandelo II